Maalintii Saddexaad oo xiriir ah waxaa Magaalada Muqdisho ka socda Shirka Wada-tashiga Musharixiinta Hogaamiyaha Soomaaliya 20/21 oo cabasha ka qaba guddiga doorashada & qorshaha DFS ay ku maamuleyso.
Sida Musharixiinta ay sheegeen waxaa loo qorsheeyay in uu socdo 21/23 ka November 2020 oo maanta ah, balse Ilo xog ogaal ah oo ka dhaw Shirka ayaa Axadle u sheegay in maalin kale lagu daray, lana soo gaba-gabeynayo Berri oo Talaado ah 24-ka November 2020.
Sababta maalinta dheeraadka ah loogu daray ayaa ah in la kordhiyay ka qaybgalayaasha, maadaama xubno uu kamid yahay Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare BFS Cabdi Xaashi Cabdullaahi ay ku biireen.
Xubno kale oo kale oo dhanka Bulshada Rayidka ah & Haweenka ayaa ku biiraya si loo dhageysto taladooda qorshaha Geedi-socodka Soomaaliya oo marxalad doorasho waddanka uu galayo 20/21.
Dhammaan xubnaha shirka ka qaybgaleysa ayaa dhaliilsan guddiga Doorashada, hab maamulka wax loo wado & howsha geedi socodka dalka 20/21 loo marayo sida ay afkooda ka caddeeyeen musharixiinta oo marar kala duwan Warbaahinta la hadashay.
Gaba-gabada waxaa la sugayaa in Shirka Wada tashiga Musharixiinta Hogaamiyaha 20/21 laga soosaaro Warmurtiyeed ku saabsan hadafka guud ee xubnaha xildoonka ah, walaacooda doorashada & Guddiga u xilsaaran ee heer Federaal & heer Dowlad Goboleed.